China Powder Metallurgy Machinery Equipment factory na ndị nrụpụta | Welfine
PM na-agba ọsọ
Fe, Cu, FeCu alloy, stainliee ígwè, graphite
Uwe, Flanged, * Tụkwasị, Miniature, Trust Washer, Rod
1) n'ime 3-70mm, nwekwara ike dị ka gị arịrịọ
n'ime mbukota: plastic akpa
mpụga mbukota: katọn, pallet
A na-ete mmanụ mmanụ; Na-etinye onwe ya mmanụ
Yiri ọrụ na-adịgide adịgide na ogologo ndụ
Performancerụ ọrụ dị elu nwere ike ịdị na nnukwu ibu, obere ọsọ na-agbanweghachi na ngwa oscillating
Ezi ihe na-arụ ọrụ ọkụ
Enwere ike iji ya na ebe ruru unyi ma na-emebi emebi
Noise dị obere karịa nke ọzọ
Adabara elu static ibu
Enwere ike itinye ya n'ọtụtụ ebe okpomọkụ
Ọdịdị ọkọlọtọ nke G7 n'obosara
Tolekpụrụ nkịtị nke dị n'èzí dayameta S7
Nwere ike ikwu na ndidi nnabata f7 / g6
Nwere ike ikwu ụlọ ndidi H7
Powder metallurgy bear is made of metal powder and other antifriction material powder pushing, sintered, plastic na tinye. Ọ nwere porous Ọdịdị. Mgbe infiltration nke mmanụ na-ekpo ọkụ, pores jupụtara mmanụ mmanu. N'ime usoro a na-arụ ọrụ, ọla na mmanụ na-ekpo ọkụ ma gbasaa, a na-apịkwa mmanụ ahụ na pores. Esemokwu dị n’elu mmiri na-ete mmanụ. Mgbe emechara ihe ahụ na-agba ume, a na-amị mmanụ mmanụ n'ime pores.
Ntụ ntụ metallurgy biarin enweghị ike lubricated ruo ogologo oge.
Oke porosity nke ntụ ntụ metallurgy biarin, ka nchekwa mmanụ dị, mana karịa pores, na-ebelata ike.
Dị otú ahụ biarin bụ mgbe ke mbuaha lubrication ala, mgbe ụfọdụ nwere ike na-etolite mkpa ịse lubrication. A na-ejikarị ha eme ihe iji gbakwunye nsogbu siri ike na ọkụ na ọnọdụ ọsọ ọsọ nke mmanu mmanu.
Dị ka ọnọdụ ọrụ dị iche iche si dị, a na-ahọrọ ntụpọ metallurgy ntụ ntụ nwere ọdịnaya mmanụ dị iche iche. Mgbe mmanụ dị ukwuu, enwere ike iji ya mee ihe na enweghị mmanu mmanu na obere ibu. Enwere ike iji ọdịnaya mmanụ mee ihe n'okpuru nnukwu ibu na oke ọsọ. Ihe osise nke graphite nke na-ebu uzuzu nwere ike imezi nchedo nke nketa n'ihi mmanu nke graphite n'onwe ya. Ihe ọghọm ya bụ na ike dị ala. N'okpuru ọnọdụ nke enweghị corrosion, ọ nwere ike ịtụle nhọrọ nke ọnụ ala na ike. Basegwè ígwè ntụ ntụ ntụ metallurgy nke nwere ogo dị elu ka elu, mana ekwesiri ike olu ike kwekọrọ n'ụzọ kwesịrị ekwesị.
Nke gara aga: uzuzu metallurgy na metal Iron na Bronze Isi
Osote: sintering igwe mmanụ impregnated Iburu
blackening ma ọ bụ nwa mkpuchi metallurgy machiner ...
Factory Mepụta ntụ ntụ nkà mmụta banyere ígwè Sintered Bush ...